कोरोना कहर : खरिपाटीमा व्यवस्थापन सोचेभन्दा राम्रो, आफन्त आउँदा खुसी
भक्तपुर खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा रहेकी डा. सलिमा कक्षपति यतिखेर धेरै खुसी छिन्। चीनमा बन्धकझैं बसिरहेकी उनलाई कहिले नेपाल जाऊँजस्तो लागेको थियो ।
चीनमा हुँदा खाना, पानी, मास्क, स्यानेटरीजस्ता सामग्रीको अभाव अनि बसेको ठाउँदेखि दायाँबायाँ गर्नै नहुने स्थिति थियो । नेपालमा आफन्तले बारम्बार फोन गर्दा उनलाई खल्लो महसुस हुन्थ्यो । कहिले सरकारले नेपाल लैजान्छ र ढुक्क हुन्छ भन्ने भइरहेको थियो । चीनमा हजाराैं व्यक्ति कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भइरहँदा त्यहाँ रहेका नेपालीलाई पनि भाइरस सर्दैन भन्न सकिँदैनथ्यो ।
सोचेभन्दा बढी सुविधा र व्यवस्थापन
भक्तपुरस्थित खरिपाटीमाआइसकेपछि उनले सोचेभन्दा पनि राम्रो व्यवस्थापन पाउनुभयो । बस्न, खानदेखि इन्टरनेटको सुविधासमेत छ । उनलाई कतिपय नेपालीले सामाजिक सञ्जालतिर चीनबाट ल्याउने नेपालीहरू कोरोना भाइरस (कोभिड नाइन्टिन) सङ्क्रमित हुन्, यिनीहरूलाई नेपाल ल्याउनै हुँदैन भनेर अफवाह फैलाएकोप्रति दुःख लागेको छ । आफूहरूबाट सङ्क्रमणको जोखिम नरहेकाले चीनबाट नेपाल ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल आउनुअघि चीनको विमानस्थलदेखि नेपालसम्म पटक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कुनै पनि लक्षण नदेखिएकाले आफूहरू सामान्य रहेको कक्षपतिको भनाइ छ । यस्तै चीनबाट नेपाल आउनुभएकी श्रद्धा श्रेष्ठले पनि सरकारले खान, बस्नदेखि अन्य सुविधा सोचेभन्दा धेरै राम्रो गरेको बताए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार नै नेपाल आएकाले आफूहरूलाई ‘कोभिड नाइन्टिन’को भाइरस नभएको र अरूलाई सर्न सक्ने सम्भावना नरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले क्वारेन्टाइनमा रहँदा ज्वरो, रुघाखोकी देखिए तत्काल परीक्षण हुने र आइसोलेसनमा राखिने व्यवस्था सरकारले मिलाएकाले कसैलाई पनि नआत्तिन आग्रह गरिन्।
खकारको नमुना परीक्षण सम्पन्न
कोरोना भाइरस प्रभावित चीनबाट नेपाल ल्याइएका १७५ जनाको खकारको (थ्रोट स्वाब) स्याम्पल लिई टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको छ । कोरोना भाइरस भए नभएको रिपोर्ट भने बुधबार मात्र आउने छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुना झाले चीनबाट ल्याइएका नेपालीको खकार नमुना परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा ल्याइसकेको जानकारी दिए। डा. झाले ठूलो सङ्ख्यामा परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले चार दिनसम्म लागेको जानकारी दिए। डा. झाका अनुसार क्वारेन्टाइनमा बस्ने नेपालीको नमुना परीक्षण गरिसकेपछि १४ दिनपछि पुनः नमुना परीक्षण गर्नुपर्छ । १४ दिनपछि पुनः उनीहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले चीनबाट ल्याइएका नेपाली १७ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्छ ।
कोरोना भाइरसको केन्द्रबिन्दु तथा सबैभन्दा बढी प्रभावित चीनको बुहानमा रहेका नेपाली लिएर आइतबार बिहान ३ः२० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमको विमान अवतरण गरेको थियो । विमानस्थलमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दासमेत १७५ जनामा कुनै समस्या नदेखिएपछि भक्तपुर खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा लगिएको थियो । चीनबाट नेपाल आउने १८० जना नेपालीले राजदूतावासमा निवेदन दिएकामा छ जनामा स्क्रिनिङका क्रममा ज्वरो देखिएपछि उनीहरू उतै रोकिएका थिए ।
आफन्त आउँदा खुसी
चितवनकी विमला श्रेष्ठलाई चीनमा रहेको छोरा कहिले आउँछ भन्ने लागेको थियो । “चीनमा कोरोना भाइरसको त्रासदी फैलिएसँगै छोराको उद्धार गरिदिन धेरै ठाउँ धाएकी थिएँ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “शनिबार रातभरि नसुतीकनै बसेँ । ” श्रेष्ठले काठमाडौँ आउनासाथ छोराले मेसेन्जरमा फोन गरेर म आएँ आमा भन्दा त्यो क्षणको जति खुसी कहिल्यै नभएको अनुभव सुनाउनुभयो । “छोराको फोन आयो । म त आत्तिएछु, फोन उठाउन पनि अलमलमा परेँ”, उनले भने।
सेनाका चिकित्सकको नेतृत्व
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सागर दाहालले नेपाली सेनाका चिकित्सक नवीन फुयाँलको नेतृत्वमा क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्यकर्मीहरू खटिएको जानकारी दिए। उनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुर र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले थप ५० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएर क्वारेन्टाइनमा खटाउन लागेको जानकारी दिए। सहप्रवक्ता दाहालका अनुसार आइतबार नै तालिम दिई स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाइएको छ । १७५ जनालाई छुट्टाछुट्टै थर्मामिटर दिइएको छ । दिनको दुई पटक आफूले आफ्नै तापक्रम नाप्नुपर्छ । त्यहाँ रजिस्टर पनि राखिएको छ । उक्त रजिस्टरमा उनीहरूले आफ्नो तापक्रम उल्लेख गर्नुपर्छ । तापक्रम बढेको खण्डमा तत्काल स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी दिनुपर्छ ।
सरकारको उल्लेखनीय कदम
नेपालमा चीनबाट आएका एक विद्यार्थीमा कोरोना भाइरस देखा परेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई कोरोनाविरुद्ध लाग्न र सावधानी अपनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएसँगै तत्काल सरकारले ४३ शøयाको आइसोलेसन वार्ड तयारी गरेको थियो । त्यही बेलादेखि नै क्वारेन्टाइनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको थियो । सरकारले चीनबाट नेपालीलाई उद्धार गरेर ल्याएपछि चीनमा फसेका नेपाली, उनीहरूका अभिभावक र आमसर्वसाधारणले सरकारको प्रशंसा गरेका छन् ।
नागरिकलाई पहिलो पटक क्वारेन्टाइन
नेपालमा यति धेरै सङ्ख्यामा उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राखिएको यो पहिलो घटना हो । योभन्दा पहिले केही सङ्ख्यामा नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीलाई मात्र क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । सरकारले यसअघि चीनको हुबेईमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गरेर ल्याउने तयारी गरे पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले केही दिन ढिलाइ हुन गएको हो ।
क्वारेन्टाइनमा ६० वटा कोठामा १९९ बेड राखिएको छ । एउटा कोठामा उचित दूरीको फरकमा एकदेखि तीन जनासम्मको सामूहिक बसोबासको व्यवस्था छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।